13 Siyaabood oo Lacag looga Sameeyo Hantida Ma guurtada ah iyada oo aan Lacag la helin 2022
Bogga ugu weyn 13 Siyaabood oo Lacag looga Sameeyo Hantida Ma guurtada ah iyada oo aan lacag la hayn 2022
Lacag ku sameynta hantida maguurtada ah waxay u baahan tahay samir iyo go'aan. Waxay noqon kartaa mid halis ah oo dhib badan, laakiin inta badan waa u qalantaa aakhirka. Sadarrada soo socda ee maqaalkan, waxaan ku tusayaa sida lacag looga sameeyo hantida maguurtada ah oo aan lacag xitaa lahayn.
Hantida ma guurtidu waa macdan dahab ah oo aad u baahan tahay inaad gasho. Waxaan rabaa inaan kaa caawiyo inaad taas sameyso adiga oo aan walwal lahayn. Markaa runtii waqtigaaga qaado si aad u akhrido ilaa dhammaadka maqaalkan dhammaan ballanqaadyadu inay bixiyaan.
Dhanka kale, waa kan jadwalka mawduuca ee muuqaalka guud ee waxa laga filayo maqaalkan.
Siyaabaha lacag looga sameeyo hantida maguurtada ah iyada oo aan lacag la hayn
Waa kuwan qaar ka mid ah siyaabaha la xaqiijiyay oo aad uga qodan karto lacag caddaan ah hanti ma -guurto ah. Si taxaddar leh u akhri!
Iyada oo loo marayo lacagaha Real-estate
Maalgelinta hantida ma-guurtada ahi waa maalgelin wadaag ah halkaas oo aad lacag kula urursato maalgashadayaasha kale sanduuqa si firfircoon loo maareeyo ee shirkado kala duwan oo si firfircoon u maamula guryaha. Waxay bixisaa dakhli wakhti gaaban ah. Waxay ku kordhisaa qiimaha iyada oo loo marayo qaddarinta taas oo ah korodhka qiimaha hantida. Markaad maalgelinayso, waa inaad ka raadisaa fund ballaadhan, si wanaagsan loo kala duwan yahay, iyo kharaj jaban oo dillaal ah si aad u isticmaasho.
Amaanooyinka maalgashiga hantida maguurtada ah (REIT)
Kalsoonida maalgashiga hantida maguurtada ah (REIT) waxay la mid tahay lacagaha hantida maguurtada ah. Farqiga u dhexeeya ayaa ah in REITs ay maamusho shirkad (ama aaminaad). Halkan maalgelintaadu waxay ku baxdaa iibsashada iyo maaraynta guryaha kala duwan si aad faa'iido u hesho. REITs waxay ku yimaadaan cabbirro iyo qaabab kala duwan.
Waxay asal ahaan diiradda saaraan dhismayaasha tafaariiqda sida suuqyada iyo xarumaha dukaamaysiga. Waxay sidoo kale diiradda saaraan soo dhaweynta sida motellada iyo hoteellada si aad u hesho noocyo aad ku maalgashato.
XIDHIIDHKA: 10 Siyaabaha Ugu Fiican ee Lacag Loogu Sameeyo Vegas 2022
Goobaha maalgashiga guryaha ee tooska ah ee tooska ah
Kuwani waa aaladaha iyo barnaamijyada moobiilka webka ee u oggolaanaya mid ka mid ah inuu bilaabo inuu maalgashi ku sameeyo hantida maguurtada ah. Halkaan barnaamijyadu waxay kugu xirayaan maareeyayaasha guryaha-ma-guurtada ah ee doonaya inay maal-gashadaan ama iibsadaan oo ay ku beddelaan raasamaalkaaga waxaad ka goosan kartaa faa'iidooyinka ama saami-qaybsiga markay helaan.
Khatar aad u saraysa ayaa halkan ka jirta laakiin haddii aad si habaysan u leedahay gurigaaga lacageed (kuwa kaydsan, si joogto ah u maal-gasha, iwm), wax dhib ah kuma jiraan maalgelinta 5%-10%.
Tani waa hab fudud oo aad ka iibsanayso qayb hanti ah, oo aad ku kiraysato dakhli, oo aad daawato akoonkaaga bangiga oo si xoog leh u neefsanaysa marka aad ku nasato qolkaaga fadhiga oo aad qaadanayso caano fadhi la qaboojiyey oo leh cunto fudud.
Halkan waxaad noqonaysaa mulkiilaha oo keliya, laakiin sidoo kale dib-u-cusboonaysiiye, koronto yaqaan, beeralay, iyo waxyaabo kale oo badan. Maadaama amaahda guryaha intooda badani ay go'an yihiin markaad amaahanayso, waxaad samayn kartaa lacag badan sanad walba si aad isaga bixiso markaad kor u qaaddo kiradaada.
Kiraynta qolka muddada-gaaban
Waxa kale oo aad ka kireyn kartaa qol ka mid ah aqalkaaga ama waxaad iibsan kartaa guri ama apartment oo aad ka kireeysan kartaa kiro waqti gaaban ah. Halkan lagama maarmaan ma aha in la iibsado guriga; waxaad isticmaali kartaa qolalkaaga firaaqada ah. Mareegaha sida Airbnb iyo meel wanaagsan iyo liisyo soo jiidasho leh, waxaad ku jirtaa lacag dhab ah.
Gelinta guriga dhexdiisa, waxaad iibsanaysaa guryaha oo waxaad ku iibin doontaa qiimo sare. Waxaad dayactiri doontaa oo hagaajin doontaa guriga, waxaad qandaraas siin doontaa shabakad qandaraasleyaal aad ku kalsoon tahay, ka dibna waxaad ku jirtaa ganacsi dhab ah.
Read: 7 Talaabo Oo Fudud Oo Ku Saabsan Sida Loo Jabiyo Heshiiska 2022 | Tilmaan Buuxo
XIDHIIDHKA: 11 Madal Oo Lacag Laguugu Siin Karo Si Loogu Tijaabiyo Alaabta Guriga 2022
Aqoonta iyo Nidaamka saxda ah
Halkan, waxaad u baahan tahay inaad hubiso oo aad hubiso ilaha, xeeladaha, durdurrada dakhliga badan, hagayaasha, xeerarka, iwm ee ganacsiga hantida ma guurtada ah ee dawladda. Waa inaad hubisaa inaad haysato macluumaadka saxda ah oo had iyo jeer weydii su'aalo ka hor intaadan maalgelin.
Iibsashada guryaha iyo u oggolaanshaha sicirka qiimaha inuu kordho muddo wakhti ah waa mid ka mid ah siyaabaha lacag looga sameeyo hantida ma -guurtada ah. Markaa taladu halkan waa, iibso guryaha, u oggolow qiimaha inuu kordho ama qaddariyo muddo wakhti ah, ka dibna ku iibi macaash.
Hab kale oo aad lacag uga samaysan karto hantida maguurtada ah waa adiga oo iibsanaya hanti kadibna u kiraynaya qof bixin kara. Si aad u bilowdo, kaliya raadso hanti dulsaar ah oo iska bixi, sii kireysiga waqti cayiman, lacag ka samee kadibna gadaal gada.
Waxaad iibsan kartaa guri, kiraysan kartaa oo u isticmaali kartaa ilo dakhli oo joogto ah sida xarumaha dhacdooyinka, hoteelada ama motels -ka, xarumaha jimicsiga, iwm.
Waa maxay Hantida Guryaha Dijital ah? Sideen lacagtayda ugu maalgelin karaa | 2022
Sida Lacag Loogu Sameeyo Koontadaada Bangiga 2022
20 Xirfadaha Ugu Faa'idada Badan In 2022 Mushahar Lagu Baro
Immisa Lacag Ah Ayuu Ninja Sameeyaa 2022?
Feudal Japan, ninja, oo sidoo kale loo yaqaan shinobi, wuxuu ahaa wakiil qarsoon oo ku takhasusay kharribaadda, basaaska,…
Darawalada Baabuurta ugu Mushaharka Badan Caalamka | 10 Dalalka ugu fiican
Ma ku cajabisay baabuurta waaweyn, waligaa ma is waydiisay sida ay noqon doonto in mid la wado?. Ama…
Halkee Ayaan Ku Iibi Karaa Lebiska Arooskayga Hadda? 11 Goobood Si Aad Dhaqaalahaaga Si Dhaqso Ah Ugu Hesho
Dharka arooska waxay u badan tahay inuu yahay shayga ugu qaalisan ee aad waligaa iibsato. Haddii ay tahay…
Waa maxay Bayaanka Dakhliga? Dulmar, Iyo Sida Ay U Shaqeyso
Ogaanshaha sida loo akhriyo oo loo falanqeeyo xogta warbixinta dakhliga, mid ka mid ah waraaqaha maaliyadeed ee ugu muhiimsan…
10 Siyaabaha Ugu Fiican ee Lacag Loogu Sameeyo Vegas 2022
Las Vegas waa mid ka mid ah meelaha ugu fiican ee dalxiiska ee adduunka. Sababtoo ah casinoskeeda, raaxada…